Shirka G20 Rome: Xidhitaanka shir jaraa'id 31ka Oktoobar 2021 ayaa lagu qabtay Nuvola
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Dowladda » Shirka G20 Rome: Xidhitaanka shir jaraa'id 31ka Oktoobar 2021 ayaa lagu qabtay Nuvola
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Wararka Dowladda • Investments • Italy War Deg Deg Ah • News • Dadka • Daalacanayo Hadda
Shirka G20 ee Rome ayaa hadda ku dhamaaday shir jaraa’id. eTurboNews Weriyaha Talyaaniga Mario Masciullo ayaa ka soo qeyb galay. Mawduucyada ugu waaweyn ee shaqada, ka sokow masiibada iyo tallaallada, waxaa ka mid ah xiisadda cimilada, soo kabashada dhaqaalaha, iyo xaaladda Afgaanistaan.
Xiritaanka Shirka G20 Rome Shir jaraa'id oo dhacay 31 Oktoobar 2021 ayaa lagu qabtay Nuvola.
Raiisel wasaaraha Talyaaniga, Mario Draghi, ayaa furay G20, isagoo rajeynaya midnimada ujeeddada ka dhanka ah masiibada.
Shir madaxeedka ayaa markii ugu horeysay lagu qabtay dalka Talyaaniga.
Francesco Tufarelli, oo ah madaxa shabakada "Europolitica", wuxuu yiri waa "aasaaska ah in qofka bini'aadamka ah dib loogu celiyo xarunta ficilada siyaasadeed iyo dhaqaalaha."
Raiisel wasaaraha Draghi wuxuu yiri: "Adduunku ha wada socdo si aan ugu guuleysto dagaalka ka dhanka ah masiibada."
Xiritaanka Shirka G20 Rome Shir jaraa'id oo uu qabtay Ra'iisul Wasaare Mario Draghi
G20, heshiis u dhexeeya Maraykanka iyo EU ee ka saarista waajibaadka birta iyo aluminium. Draghi: "Tallaabada koowaad ee furfurnaanta ganacsiga."
G20, xagga heshiis hoos u dhaca cimilada: saqafka 1.5 darajo ee kulaylka caalamiga ah laakiin kaliya tixraac aan caddayn oo ku saabsan qiiqa eber "bartamihii qarniga"
G20, Draghi wuxuu sheeganayaa: "Erayada waxaan ka buuxinay nuxur. Waxaan si tartiib tartiib ah u gaari doonaa 2050 oo ah taariikhda eber qiiqa."
"Kulankan, waxaan hubinnay in riyadeenu ay weli nool tahay, laakiin hadda waa inaan hubinno inaan u beddelno xaqiiqo," ayuu yiri ra'iisul wasaaraha oo shir jaraa'id qabtay. "Ugu dambayntii, waxaa jira ballan ah in 100 bilyan la siinayo sannadkii dalalka saboolka ah." Ka dibna wuxuu ku dhawaaqay in Talyaanigu uu saddex jibaari doono ballanqaadkiisa maaliyadeed 1.4 bilyan sannadkii 5ta sano ee soo socota ee sanduuqa cimilada cagaaran.
Ra’iisul Wasaaruhu wuxuu intaas kaddib si gaar ah uga hadlay natiijada la helay, isagoo ku macneeyay “waxaan ku bixinnay dhaqaale badan; Ballanqaadyadaas waanu ilaalinay, waxaana xaqiijinay in riyadeenu ay weli nooshahay oo aan horumar samaynayno. Waxa nalagu xukumayaa waxa aanu samayno ee ma aha waxa aanu nidhaahno”ayuu hadalkiisa sii raaciyay dhawr hogaamiye. Kadibna wuxuu ballanqaaday: "Waan ku hanweynahay" natiijooyinka laga helay G20 laakiin "tani waa bilow oo kaliya."
G20, Draghi: "100 bilyan oo ka socota G20 ee wadamada saboolka ah ee cimilada."
"G20 wuxuu ahaa guul," ayuu yiri ra'iisul wasaaraha, Mario Draghi, kaas oo go'aansaday inuu qiimeeyo shir madaxeedka hadda ku dhamaaday Rome ee xaaladda degdegga ah ee cimilada. Shir madaxeed, ayuu yidhi, wuxuu keenay faa'iidooyin badan, xitaa haddii "ay fududayn." Kuwaas waxaa ka mid ah, Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu tixraacayaa dib-u-habeynta canshuuraha caalamiga ah "in aan isku daynay inaan sameyno sanado aan guul lahayn," xadka 1.5 C ° celceliska kulaylka caalamiga ah "wuxuu wanaajiyaa heshiisyada Paris," marka lagu daro "in la keenay wadamada qaar ka shakisan mawqifyada caamka ah ee decarbonization, "iyado si cad u tixraacaya Ruushka iyo, dhammaan ka sarreeya, Shiinaha.
Guushii ugu horreysay ee Draghi uu hoosta ka xariiqay waa xadka ugu sarreeya ee kor u kaca heerkulka celceliska caalamiga ah, oo lagu dejiyay 1.5 C °: "Marka la eego cimilada, markii ugu horreysay, waddamada G20 waxay go'aansadeen inay ku ilaashadaan hadafka ah inay ku jiraan kulaylka hoose 1.5 oo leh waxqabad degdeg ah iyo ballanqaadyo dhexdhexaad ah,” ayuu ku yiri shirkiisa jaraa'id ee ugu dambeeyay. Ku darida "maalgelinta dadweynaha" ee dhismaha dhirta cusub ee dhuxusha "ma dhaafi doonto dhammaadka sanadkan."
Arrinta qiiqa eber ah iyo iska caabinta ay muujiyeen Shiinaha iyo Ruushka, oo aan aqbalin wakhtiga kama dambaysta ah ee 2050, ayaa saadaalinaya yoolka tobanka sano ee soo socda (2060). Mawduuca ugu weyn ee su'aalaha ay saxafiyiintu u gudbiyeen ra'iisul wasaaraha Draghi, si kastaba ha ahaatee, la sheegay inuu ku qanacsan yahay, xitaa wuxuu muujiyay inuu la yaabay furfurnaanta, (sida uu sheegay), oo ay muujiyeen labada dawladood.
"Laga soo bilaabo Shiinaha ilaa dhowr maalmood ka hor waxaan filayay dabeecad adag; Waxaa jiray rabitaan ah in la fahmo luqad mustaqbalka u janjeera dhanka mustaqbalka marka loo eego kuwii hore," ayuu raaciyay Draghi, "Ruushka iyo Shiinaha waxay aqbaleen caddaynta sayniska ee 1.5 C °, taas oo ku lug leh allabaryo aad u badan, [mana ahan ballanqaadyo fudud] hayn. Shiinaha ayaa soo saara 50% birta adduunka; dhir badan ayaa ku orda dhuxusha; waa kala guur adag.” Iyo xadka 2050, wuxuu ku daray: "Marka la barbardhigo xaaladdii hore, ballanqaadku waa wax yar oo ku wajahan 2050 luqadda war-saxaafadeedka. Sax maaha, balse hore ayay u maqnayd. Waxaa dhacay isbeddel leh luqad rajo badan xitaa dhinaca waddammada ilaa hadda maya odhan jiray.”
Heshiiskanina waxa uu ahaa mid suurto gal ah, ayuu ku macneeyay, waxa kaliya oo ay ku mahadsan tahay hab ku salaysan dhinacyo badan oo ay ku lug lahaayeen dhammaan awoodaha ka soo qayb galay: "G20-kii waxa aanu aragnay dalal u soo dhawaaday mawqifyada dadka kale ee luqadda saxda ah leh," ayuu yidhi.
“Waxaan u mahadcelinayaa Danjire Mattiolo iyo dhammaan Sherpas shaqada ay qabteen. Wax baa iska beddelay G20, wada shaqayn la’aantii hore uma soconno, wada shaqaynta ugu wanaagsan ee aynu ognahayna waa dhinacyo badan, oo xeerar la qoray waa hore, kuwaas oo noo damaanad qaaday barwaaqo.
Xeerarka la bedelayo waa in si wada jir ah wax looga bedelaa.”
Waxa uu tusaale u soo qaatay: “Markii ugu horreysay ee dukumeenti G20 ah, cutubka 30, waxaan ka helnaa jumlad ka hadlaysa hababka loo dejiyo qiimaha dhuxusha. Waxaan ugu baaqaynaa qaybaha kala duwan ee G20 inay u dhaqmaan si waafaqsan waajibaadkooda si loo gaaro yoolalkan iyo isku dhafka ku habboon dhaqaalaha leh gaaska aqalka dhirta lagu sii daayo iyada oo bartilmaameed u ah wadamada ugu saboolsan. Xidhiidhka ka dhashay isbeddelku waa wacyigelinta in wax kasta oo horumar ah marka loo eego waayihii hore oo ay weheliso ballan qaadka caawinta waddamada qaniga ah ay macno samaynayso. Waa mid ka mid ah kiisaska Shiinaha iyo Ruushka labaduba ay go'aansadeen inay beddelaan mowqifkooda."
Draghi, oo si adag u doonayay shirwaynahan, ayaa sidoo kale dib u soo celiyay ballanqaadkii loo sameeyay wadamada ugu saboolsan adduunka: "Waxaan dhignay aasaaska dib u soo kabashada si siman, waxaanan helnay habab cusub oo lagu taageerayo wadamada aduunka," ayuu ku soo gabagabeeyay PM Draghi.
Hadalo dheeri ah
Biden: "Waxaan ku imaan doonnaa natiijooyin la taaban karo, mahadsanid Talyaaniga."
Shir madaxeedka G20 ee Rome wuxuu soo saaray natiijooyin "la taaban karo" oo ku saabsan cimilada, masiibada COVID-19, iyo dhaqaalaha. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sidan ku sheegay shirkii jaraa’id ee ugu dambeeyay, ka hor inta uusan u ambabixin Glasgow, oo uu ugu talagalay COP26, wuxuuna si cad ugu mahadceliyay Talyaaniga iyo Ra'iisul Wasaaraha Mario Draghi "shaqada weyn ee la qabtay."
"Waxaan aaminsanahay inaan sameynay horumar la taaban karo, sidoo kale waxaa mahad leh go'aanka uu Mareykanku miiska keenay" ee doodaha. Shir-madaxeedka "wuxuu muujiyay awoodda Mareykanka marka ay la shaqeyso oo ay kala shaqeyso xulafadayada arrimaha." Biden wuxuu markaa yiri "ma jiraan wax bedeli kara wada xaajoodyada fool ka foolka ah ee iskaashiga caalamiga ah."
Hal tiriliyan oo geed ayaa la beeray 2030-ka
"Innaga oo aqoonsanay deg-degga degdegga ah ee lagula dagaallamayo xaalufka ciidda iyo abuurista weel cusub oo kaarboon, waxaan wadaagnaa yoolka hamiga ah ee ah in si wadajir ah loo beero 1 tiriliyan geed, annaga oo diiradda saareyna nidaamka deegaanka ee aadka u xumaaday ee meeraha." Tan waxaa lagu akhriyi karaa ku dhawaaqistii ugu dambaysay ee shirkii G20 ee Rome.
"Waxaan ku boorineynaa wadamada kale inay ku biiraan ciidamada G20 si loo gaaro yoolkan caalamiga ah 2030, oo ay ku jiraan mashaariicda cimilada, oo ay ku lug leeyihiin ganacsiga gaarka ah iyo bulshada rayidka ah," ayay tiri.
Johnson: "Haddii Glasgow fashilanto, wax walba waa fashilmaan."
"Waan caddaan doonaa, haddii Glasgow guuldareysto, wax walba waa fashilmaan." Raiisel wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa sidan sheegay isagoo tixraacaya COP26 shir jaraa'id oo uu ku qabtay dhamaadka G20 ee Rome. "Waxaan horumar ka sameynay G20-kan, laakiin weli waxaan haynaa waddo aan ku socono," ayuu raaciyay, "Waqti ma aanan hadlin," ayuu ka faallooday Draghi-Erdogan dhalaalid markii ugu horreysay ee G20.
Faallo ka timid Huffington Post
Laga soo bilaabo G20 ee Rome, waxaan ka filaynay jawaabo badan iyo ficilo la taaban karo oo ku saabsan dhinaca hore ee dagaalka ka dhanka ah qalalaasaha cimilada. Waanu ka niyad jabnay heshiiskii cimilada ee maanta la saxeexay. Tani waa heshiis si rasmi ah u dhigaya wixii horay loo helay, iyada oo aan la bixin ballanqaadyo la taaban karo oo ku saabsan maaliyadda cimilada, laga bilaabo Talyaaniga oo aan miiska soo saarin waxtarkeeda caddaaladda - ugu yaraan 3 bilyan oo Yuuro sannadkii - wadar ahaan 100 bilyan oo doolar ayaa 6 sano ka hor lagu yaboohay magaalada Paris si ay uga go'an tahay wadammada warshadaha leh si ay u caawiyaan dadka saboolka ah ee ficilka cimilada. Marka la soo koobo, Nuvola Rome, G20 waxay asal ahaan ka heleen biyo kulul dagaalka ka dhanka ah dhibaatooyinka cimilada.
Hadda rajadu waxay tahay in Glasgow, halkaas oo COP26 uu maanta ka furmayo, waa weyn ee meeraha waxay awood u yeelan doonaan inay helaan heshiis ay ku gaaraan heshiis cusub oo cimilo oo hami leh oo awood u leh inay sii noolaadaan bartilmaameedka 1.5 ° C ee heshiiskii Paris ee la saxiixay 2015, laakiin sidoo kale in la dardargeliyo la qabsiga isbeddelka cimilada, la qabsiga khasaaraha iyo dhaawaca bulshooyinka ay sida weyn u saamaysay xaaladda degdegga ah, laakiin sidoo kale iyo wax kasta oo ka sarreeya si ku filan loo maalgeliyo ficilka dalalka saboolka ah iyo dhamaystirka Rulebook, ie, xeerarka fulinta ee heshiiska, si ugu dambeyntii ka dhig mid shaqeynaya.
Heshiiska ganacsiga iyo Afgaanistaan.
Turkigu wuxuu hadiyad ahaan u keenay taariikh nololeedka si uu u saxiixo nabadda.